किन तपाईंको वाईफाई बेकार हुन्छ र यो कसरी ठीक छ?
किन तपाईंको WiFi बेकार छ र यो कसरी ठीक गर्न
किन वाईफाई बेच्नुहुन्छ
च्यानलहरू र आवृत्तिहरू
झण्डै वाईफाई बेक गर्दछ घरको नेटवर्कमा। हामीले सबैले घर वाइफाइको खराब कार्यान्वयन र पछिको विच्छेदन, विच्छेद र गृह सुधार गरेका थियौं। यदि तपाई एक तयार आईटी मास्टर हुनुहुन्छ, साथी साथीहरूलाई सम्भवतः खुलासा गर्ने सन्दर्भमा खोज्न र सहयोगीहरू किन उनीहरूले आफ्नो स्विच स्वागत स्वागत उपकरणहरूमा लिपटेका छन् काम गर्दैनन् - र के हुनेछ?
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। तपाईले तपाईलाई सहयोग पुर्याउनुभएको छ भने तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ। प्रत्येक दिन आईटी प्रतिभाको रूपमा।
वाईफाई यसको अत्यन्तै स्वभावले अनावश्यक गुणस्तर र सिग्नल शक्तिको सन्दर्भमा तारिख भन्दा खराब छ। सिग्नलहरू जुन तारिखको रूपमा भौतिक माध्यममा जानुपर्छ एक उचित तरिका हो। ताररहित संकेतहरू एक-अर्कासँग हस्तक्षेप गर्न सक्दछ र उनीहरूका टेलिभिजनको उत्थानबाट अझ धेरै टाढा गुमाउँदछ। वाईफाई भरपर्दो एक व्यापार बन्द छ, तर यो एक ठूलो धेरै मानिसहरू बनाउन तयार छन् - हाम्रो घरको अधिक भागमा ईथरनेट एसोसिएशनको लागि कुनै स्थान छैन - गजेटहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यसैले हामी हाम्रो डेटास्ट्रीम को शक्ति को दायरा को एक चर कंबल को लागी बलिदान गर्छन जुन शाब्दिक मा ईथर मा तैरन्छ। सबै भन्दा राम्रो हामी गर्न सक्दछ कम्बलमा छेदहरू भरिएको छ, यो अझ बढी मोटो ठोस धुंध असंबद्ध बनाउन जसले तपाईंको सम्पूर्ण घर कवर गर्दछ।
निरीक्षण वेब ट्राफिक स्विच गर्दछ। तपाईं तिनीहरूको क्षमताको बारेमा बढ्न सक्नुहुनेछ र स्विचहरू र स्विचहरूसँग केथको पहिलो अनुभवमा भाग लिनुहुन्छ। कुनै पनि स्थितिमा, आईएसपी द्वारा लिइएको स्विच सामान्य 2-in-1 ग्याजेटहरू हुन्। तिनीहरू दुबै ट्राफिक निरीक्षण गर्छन् र रेडियो संकेतहरूलाई प्रसारण गर्दछ जसले तपाईंको ताररहित सङ्गठनलाई फ्रेम गर्दछ। यो कुरा हो कि तपाईंको स्विचमा पुन: प्राप्ति तारहरू तपाईका लागि हुन् र तपाईले आफ्नो घरको कमजोर स्थानमा बिर्सनु पर्ने हुन सक्नुहुनेछ, अझै पनि वायरलेस सिग्नलहरू जादूबाउन्ड र 90-डिग्री किनारमा कुराकानी गर्ने उद्देश्य हुन्। त्यसैले तिनीहरू सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू समान तरिकाले समान ठाडो रूपमा वा तेर्सो रूपमा भनेका छन्।
जबकि स्वागत उपकरण को स्थिति गुंजाइश हुन सक्छ, यो अझै पनि तपाइँको सम्पूर्ण घर को कवर नहीं हुनेछ। किनकि यी 2-in-1 स्विच डबलमा दुई कार्य गर्दैछ, र तिनीहरूमध्ये एक मात्र हो, तिनीहरू सामान्य रूपमा वाईफाई पहुँच पोष्टहरू (WAP) भनिने समर्पित ग्याजेटहरू भन्दा कम सफल हुन्छन्।
कम्बो स्विच र वाइफाइ प्रसारण ग्याजेट नियमित रूपले सम्पूर्ण घरमा दायरा दिनको लागि अत्यधिक रूपमा र लड्न प्रयास गर्दछ। बरु, समान विक्रेताको एक प्यापको एक प्याकेज एकअर्कासँग कुराकानी गर्नेछ, र तपाईंको घरको लागि बढी दायराको दायरा दिनुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि यी ग्याजेटहरू अझै पनि उत्पादन सिग्नल जुन सामान्य रूपमा क्षैतिज हो, ठाडो छैन। बन्द मौकामा तपाईको बहु बहुमुखी घरमा तपाइँ प्रत्येक फ्लोरमा कम्तिमा WAP को आवश्यक पर्दैन।
WiFi-empowered र WiFi-उत्पादन ग्याजेटहरू तथ्यको प्रकाशमा कुराकानी गर्न सक्छन् कि उनीहरूले समान मानक प्रयोग गर्न संवाद गर्न सक्छन्: 802.11 मानक, जुन ग्याजेटले विभिन्न च्यानलहरूमा क्रिसमस जानकारी कसरी संवाद गर्न सक्छ भनेर परिभाषित गर्दछ।
802.11 मानक भित्र, फरक च्यानल ग्याजेटहरू संवाद गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ, सबै जसरी अनियमित छन्, जसको मतलब उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएनन् र तपाईं तिनीहरूलाई संवाद गर्न असामान्य सहमतिसँग परेशान गर्नुपर्दैन। तिनीहरू छोटो दायरा पत्राचारका लागि प्रायः भागका लागि हुन्, त्यसोभए महत्वपूर्ण सिग्नल ट्राभलहरू हुन सक्दैनन् - तपाईं आफ्नो पड़ोस बिहान बिहान डीजे बाट अज्ञात पुनरावर्तीमा कुराकानी गर्नुहुन्न। तथापि, धेरै संख्यामा च्यानलहरू एक अर्काको नजिक छन् र छिमेकी घरबाट वा वाईफाई प्रसारण गर्न वा सामान्य घर भित्रै समान घर भित्रै पाइन्छ।
तपाईं 5GHz वा 2.4 GHz को लागि आफ्नो ग्याजेट सेटिङ बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापक दायरा 2.4 हो र त्यस दायरामा रहेका च्यानलहरू जोध्वनि गर्न एकअर्काबाट टाढा रहेका छन् 1, 6, र 11। यी सबै सामान्य निर्णयहरू छन्, र त्यस घटनामा तपाईंले तिनीहरूलाई रोज्नु भएको छ कि तपाइँ निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ आफ्नो छिमेकीहरू संग आवरण नगर्नु हुनेछ।
यद्यपि, तपाईंसँग WAP मा छ वा त्यहि च्यानलमा स्विच गर्दछ, यसको माथि उल्लेख गरिएको तीन मध्ये एक हो भने, उनीहरूले तपाइँको वाईफाईलाई मध्यस्थ र उत्तीर्ण गर्नेछन्। तपाईले 5GHz लाई यो तथ्यको प्रकाशमा लैजान आवश्यक हुन सक्छ कि सिग्नलको छोटो दायराको बावजुद, यो साँच्चिकै आधारमा लाभ हो कि त्यहाँ त्यहाँ स्पष्ट च्यानल हुनेछ।
नेटवर्क टाइम प्रोटोकल (एनटीपी) के हो? | एक पूर्ण मार्गदर्शक
डिजिटल मार्केटिंग मा कैरियर कसरि निर्माण गर्ने?